लोकतन्त्रकाे खिल्ली उडाउँदै शक्तिकाे दुरूपयोग गरेर पत्रकारलार्इ हत्कडी! कतिसम्म जायज? – PathivaraOnline
Home > समाचार > लोकतन्त्रकाे खिल्ली उडाउँदै शक्तिकाे दुरूपयोग गरेर पत्रकारलार्इ हत्कडी! कतिसम्म जायज?
admin September 11, 2018 September 11, 2018 समाचार 0
काठमाडौं। समाचार लेख्नेहरुको हातमा अब कलम नभइ हत्कडी लाग्न थालेको छ। सत्ताको शक्तिको आडमा प्रभावशालीहरुले पत्रकारहरुलाई हत्कडी लगाउन थालेका छन्। पत्रकारहरुलाई तर्साउन धम्कयाउन प्रयोग हुँदै आएको विद्युतिय कारोबार ऐनले नपुगेर मुलुकी संहितामा व्यवस्था गरिएको फौजदारी व्यवस्थाले पत्रकारहरु झन बढी प्रताडित हुने खतरा बढिरहेको छ।
सत्ता र शक्तिको आडमा जवाफदेहिहरुले पनि आफू माथि लागेका आरोपहरुको जवाफ दिनुभन्दा पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेर पत्रकारको हातमा हत्कडी लगाउन उद्यत भएका छन्।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको जवाफदेहिता हो। लोकतन्त्रमा आम नागरिकले आफ्ना जनप्रतिनिधी र अधिकारीहरुलाई प्रश्न सोध्न सक्छन। सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिनु सम्वन्धितको कर्तव्य हो। कतिपय सन्दर्भमा आफू माथि लागेका आरोपको नागरिकको बीचमा जवाफ दिएर त्यस बारेमा सम्वन्धित पक्ष वा व्यक्तिले प्रष्ट पार्नु पर्दछ। तर नेपालमा अहिले लोकतन्त्रका आधारभुत मूल्य र मान्यता विरुद्ध शक्तिमा रहेकाहरुबाटै शुरु भएको छ।
लोकतन्त्रको पर्यायको रुपमा रहेको स्वत्नत्र प्रेसको घाटी थिच्ने प्रयास भइरहेको छ। तर लोकतन्त्रै लागि लडेका दलहरु मौन प्राय छन्। लोकतन्त्रै लागि सडकमा काँधमा काँधमा मिलाएर लडेका प्रेसलाई सत्तामा पुग्ने वित्तिकै छड्ने नजर लगाएर हेर्ने काममा राजनीतिक दलहरु नै देखिएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरु नै देखिएका छन्।
राजनीतिक दलहरुको सहमति नहुने थियो भने मुलुकी संहितामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको स्वतन्त्रता र लेखकीय स्वतन्त्रतामा आँच आउने व्यवस्था हुन्थ्यो भनेर मान्न सकिदैन। पत्रकारीता जगत आन्दोलित छ। संहिताको प्रेस विरोधी प्रावधान हटाउन माग गरिरहेको छ। तर सरकार सुनिरहेको छैन। बरु सरकार प्रेसलाई तर्साउन यसअघीदेखि दुरुपयोग हुँदै आएको विद्युतिय कारोबार ऐन मार्फत पत्रकारलाई हतकडी लगाइरहेको छ।
समाचार लेखेकै आधारमा ललितपुरका पत्रकार तथा खोजतलास डटकमका प्रधानसम्पादक राजु बस्नेतलाई हतकडी लगाइरहँदा नेपालको संसद चुप छ। लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरु चुप छन्। ललितपुरकै जनप्रतिनिधी पम्फा भुसाल र राजकाजी महर्जनको हरिसिद्धी इटा टायल कारखानाको जग्गाको बिषयमा अस्वभाविक चासो र त्यसका बारेमा जवाफ मादा उल्टै पत्रकार बस्नेतलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै हतकडी लगाइएको छ।
हामीमाथि प्रश्न उठाउने हामीलाई आरोप लगाउने भन्ने शैलीमा बस्नेतलाई पक्राउ गराइएको छ। प्रहरीकहाँ उजुरी दिएपछि प्रहरीले प्रेस काउन्सिल र सूचना विभागमा दर्ता भएका सञ्चार माध्मयलाई काउन्सिलमै गएर निरुपण गर्न भन्दै आएकोमा यो पटक अदालतबाट आदेश गराएर पत्रकार बस्नेतलाई पक्राउ गराइएको छ। अनुसन्धानका लागि म्याद थपिएको छ। समाचार लेखेकै आधारमा अदालतमा उजुरी दिएर अदालतबाट आदेश गराई पत्रकारलाई हतकडी सहित पक्राउ गरेर संसारभर नेपालले दिएको सन्देशले लोकतन्त्रवादीहरु लज्जित भएका छन्।
दुई तिहाइको वहुमत भएको सरकारसँग पनि केहि लज्जा बाँकी छ भने प्रेसलाई हतकडी लगाएर दमन गर्ने कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्छ। राजु बस्नेत सहित त्यस्ता धेरै पत्रकार अहिले पनि विद्युतिय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गरिदै प्रहरी हिरासतमा छन्।
नेताहरु सत्तामा पुग्ने वित्तिकै आफूहरुलाई प्रश्न सोध्ने हैन भन्ने भावमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। हामीले चाहेको बेलामा मात्र जवाफ दिने हो, हाम्रा बाटो अवरुद्ध हुनेगरि प्रश्न सोध्ने छुट कसैलाई छैन, सोध्नेहरु हतकडी लगाएर जेल जानुपर्छ भन्ने भावबाट सत्तारुढ दलका नेताहरु प्रस्तुत भइरहेका छन्। यतिखेर सत्तामा रहेकाहरु तथा सत्ता चलाइरहेका कमरेडहरुलाई अप्रिय लाग्ने प्रश्नहरु हैन चाकडी र भक्तिभावको भाषा मात्र सुन्न मन पर्न थालेको छ।
भक्तिगान नगर्ने तथा प्रश्न गर्ने खोजतलास डटकमका प्रधानसम्पादक राजु बस्नेतलाई अदालतको आदेश लिएर प्रहरीले पुनः नियन्त्रणमा लिएको छ । उनलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०७५।०५।२४ गते पक्राउ पुर्जीका लागि आदेश लिएर पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने तयारी छ।
सुचना विभागमा दर्ता भइ प्रेस काउन्सिलमा सुचिकृत भएका कुनै पनि समाचार संस्थालाई समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेकै आधारमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा नलगाउने मान्यता विरुद्ध एवं सो ऐनमा आकर्षित नै नहुने विषयमा राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग गरी पत्रकारलाई अनावश्यक दुःख दिने र धरपकड गर्ने पूर्वाग्रही सोच र मनसाय अनुसार पत्रकार बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको छ। सरकारले आफ्ना कमजोरी र भ्रष्टाचारका विषयहरु लुकाउन सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि ऐन र अदालतको दुरुपयोग गर्दै राज्यसत्ताको शक्तिको आडमा आक्रमणमा उत्रिएको छ ।
एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न वहानामा वा विचार, सिद्धान्त र आस्था नमिलेकै आधारमा संचारकर्मी र संचारमाध्यममाथि सरकारले गरिरहेको दमन, विभेद र पक्राउ आपत्तिजनक छ। यो घटनाले सिंगो नेपाली प्रेस तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको नाङ्गो आक्रमण भएको छ। घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी पक्राउ परेका संचारकर्मी राजु बस्नेतलाई विना शर्त रिहाइ गर्नुमा सरकारको हित छ। नत्र सरकार र तिनका शक्ति उपयोग गर्नेहरुले भने हुन्छ हामी प्रश्न सुन्न हैन चाकडी गराउन मन पराउँछौ। हामी भक्तिगान गराउन मन पराउँछौ। हाम्रो भक्तिगान नगर्ने पत्रकारहरु जेल जान तयार रहनु भनेर।
हाम्राकुरा डटकमबाट ।